Ragii aay so xuleyn laba Shariif oo buuxin waayey Sharuudihii barlamaanka. | Anti-Tribalism
← MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA: “ Xukuumaddu saameyn ma lahan haddii Ra’iisal Wasaaraha musharrax noqday”
Calanka Somalia →
Ragii aay so xuleyn laba Shariif oo buuxin waayey Sharuudihii barlamaanka.
16 August 2012 (Moment Media Group)- Madaxweyne Shariif iyo Shariif Xasan Sheekh Aden oo beryahan si aan horey looga baran aad u xanaaqsan ayaa la sheegayaa inay odoyaasha dhaqanaka Soomaaliyeed oo ay labadooduba la shirayeen maalmahaan si gaar gaar ah, afurna u samaynayeen ayaa la sheegayaa inay u sheegeen inaysan aqbalin xubnaha dib loogu soo celinay.
Madaxwyne Shariif ayaa la sheegayaa in dib loo soo celiyey xubno badan oo isaga taageerayaal u ahaa, xubnahaas oo ka tirsanaa maxaakiimtii islaamka iyo qaar qraabo la ah madaxweynaha, xubnahaas ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin Sh Cabdulqaadir Cali Cumar, Xasan Macalin iyo Aabaha dhalay mid kamid ah Xasaska madaxweyne Shariif.
Sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aden ayaa la sheegayaa in dib loogu soo celiyey xubno badan oo isaga taageerayaal u ahaa xubnahaas oo la sheegayo inay soo buuxin waayeen shuruudihii ay u dejiyeen gudiga farsamada xubnaha soo gelayo Baarlamaanka Soomaaliya. Xubnahaas ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin Mxamed Ibraahin Xaabsade iyo Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil, Labadaan nin oo kamid ahaa qabqablayaasha dagaalka Soomaaliya.
Xubnahaan loo diidey inay Baarlamaanka ka mid noqdaan ayaa la sheegayaa inay muujinayso sida beesha Caalamku aysan Markaan u dooneynin inay dib usoo laabtaan labada Shariif oo lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan oo ay ku sameeyeen hantidii qaranka. Shariif Xasan ayaa laga duubay Video muujinaya isaga oo dhahaaya in shahaadada dugsiga sare suuqa taalo qof diidi kartana aysan jirin, arintaan oo meesha ka saaraysa rajada Shariif Xasan Sheekh Aden ka lahaa hogaank Dalka, maadaama aysan suuragal ahayn in qof aaminsan in shahaadooyinka suuqa laga soo gato lagu aamino hogaanka Dalka. Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa Maalmahaan bilaabay magacaabid Gobolo iyo degmooyin si aan waafaqsaneyn sharciga arintaan oo Shariifku ku doonayo inuu cod ku helo, balse muujinaysa sida mdaxweynuhu uu ugu dheelayo sharciga Dalka. Madaxweynaha degmooyinka uu magacaabayo qaarkood ayaysan ka dhisnayn 20 guri oo cariish ah. Madaxweynaha ayaa sidoo kale isku dayey inuu kala diro gudiga farsamada, balse waxaa arintaa ka diidey saxiixayaasha kale iyo Beesha Caalamka. Isku soo wada duube labada Shariif ayaad moodaa inay haatan ku jiraan waqtigoodii ugu xumaa siyasada Soomaaliya iyada oo rajadoodii ahayd in dib loo doorto ay mugdi sii galayso, iyagoo haatan bilaabay iny caqabado abuuraan odoyaashana u sheegaan inay diidaan talooyinka gudiga farsamada.
Proofread carefully to see if you any words out.Prof.Ibrahim